यिनै हुन आफ्नो ११ महिने शिशुलाई कलेजोको टुक्रा दिने बाबु – Dainik Samchar
March 21, 2021 255
बिबिसी – ११ महिने बालकको महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ ।शनिबार राति ८ घण्टा लगाएर शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरुले कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सफल भएका हुन् । ३५ वर्षका बाबुले आफ्नो छोरलाई कलेजो दिएका थिए ।
शिक्षण अस्पतालका लिभर, प्यान्क्रियाज सर्जन प्रा। डा। रमेश सिंह भण्डारीको नेतृत्तमा कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको थियो । काभ्रे घर भएका ति बालकको डेढ महिनादेखि प्रत्यारोपणको लागि तयारी गरिएको थियो । सानो उमेरमा गरिएको पहिलो प्रत्यारोपण भएको बताइएको छ ।
प्रत्यारोपणमा सघाउन फोर्टिस अस्पताल भारतका डा विजय भिजको नेतृत्वमा चिकित्सकको टोली आएको थियो । उनीहरुको सहयोगमा प्रत्यारोपण सफल भएको बताइएको छ । कलेजो प्रत्यारोपण भने कोरोना महामारी सुरु भए यताको यो नै पहिलो हो ।
शल्यक्रियामा संलग्न प्राध्यापक डा। रमेशसिंह भण्डारीका अनुसार ती बालकलाई ुबिलिअरी अट्रिजियाु भन्ने समस्या थियो। उनलाई जन्डिस देखिएको थियो र उनको कलेजो कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
Prevसम्झना राउटेनी अब फिल्म खेल्ने,बिहे र हनिमुनको तयारी बारे यस्तो भनिन (भिडियो सहित)
Nextविदेशबाटै अनलाइन मार्फत पुन: श्रम स्वीकृति कसरी गर्ने ? (भिडियो)
गर्भनिरोधक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? यसाे भन्छन् चिकित्सक